I-Wordfence Security Plugin - Uchwepheshe we-Semalt Ukhuluma Indlela Yokuvikela Iwebhusayithi Yakho Ye-WordPress
Ukuhlaselwa kweWebhu manje sekuyisisongo sangempela kumasayithi e-commerce, okushiya abanikazi bezindawo kanye nabathengisi bengenakho ukukhetha kodwa ukuthuthukisa ukuphepha kwewebsite njalo. Kodwa-ke, abathengisi abasebenzisa izingosi ze-Wordfence abanesizathu sokukhathazeka ngemuva kokufakwa kwe-Wordfence plugin embonini yokuthengisa inthanethi.
I-plugin ye-Wordfence inikeza ukuvikelwa kwe-website yesikhathi sangempela kanye nesipiliyoni se-analytics esimangalisayo. Le plugin iqukethe iphakethe eligcwele eligcwele umlilo kanye ne-anti-virus elivimbela imizamo yamakhodi anonya, i-traffic fake, nabagadli bazama kuwebhusayithi yakho. I-plugin ye-Wordfence inikeza abathengisi nabanikazi bewebhu ithuba lokusebenzisa izici ze-geo-blocking, ukuhlola okuhleliwe, nokuqinisekiswa kwenethiwekhi.
Ochwepheshe abahola phambili Semalt Amasevisi Edijithali, uJulia Vashneva, wembula lapha amathiphu awusizo ukuze ubhekane nenkinga ngempumelelo.
Okudingayo ukwazi nge-Wordfence plugin
I-Wordfence iqukethe imininingwane ephelele yekheli le-IP, ukuphathwa kokuqukethwe, nezinqubo zokungena ngemvume. Le plugin ye-WordPress ifika kokubili izimpendulo ze-premium nezinguhhala. Ukusebenzisa i-premium version ye-plugin ye-Wordfence ikunika ithuba lokujabulela ukuvinjwa okusekelwe ezweni, ukungena ngemvume mahhala, nokuhlola.
Ukufaka nokusetha i-plugin ye-Wordfence kuwebhusayithi yakho kuwumsebenzi olula oke wawuqeda kumkhankaso wakho. Abanikazi bewebhusayithi abasebenzisa le plugin bangasetha ikheli labo le-imeyili ukuze bathole izaziso njalo lapho bethola imakethe yabo ehlosiwe. Kodwa-ke, amasayithi abathintekile nge-web spiders kanye ne-bots angaphazamiseka ngokushesha ngenxa yenani elikhulu lama-imeyili eliqhutshwa kusayithi.
Uma kuziwa ekutheni ukukhangisa kokuqukethwe , amasu okuhlala isikhathi eside akhethwa kunqubomgomo yesikhathi esifushane. I-plugin ye-Wordfence ibeka abanikazi bewebhusayithi esikhundleni esihle sokuhlaziya nokuqapha lapho bekhona khona ngemuva kokufaka nokubeka i-plugin ye-Wordfence yokuphepha kwiwebhusayithi yakho ye-e-commerce, iklayenti ijabulela isici sokuvimbela izwe, lapho umuntu angavimbela khona amakheli e-ip bombarding website.
Ukuvimbela ama-bots nezinhloli zewebhu ngokusebenzisa i-Wordfence plugin
Ukuvimbela i-bots nezinhloli ze-web kungaba umsebenzi oqine kakhulu njengoba i-bots iyaqhubeka ishintsha futhi ishintshe amakheli e-IP. Ukuvimbela ama-bots kanye nezikhawu zewebhu, zenze kokubili inqubo ejwayelekile futhi ephumelelayo ukulandelela ibhu njengoba iguqula ubunikazi.
Amabhubhe angaba yisisusa sangempela kumawebhusayithi e-commerce. Njengoba sishilo ekuqaleni, i-Wordfence plugin iqukethe isici sokuvimbela izwe. Izinkinga zingena uma uzama ukuvimba uhla lwamakheli we-IP avela ezweni ofuna ukwenza ibhizinisi. Noma nini lapho ungena ku-akhawunti yakho, idatha ijwayele ukuthatha imininingwane yewebhusayithi yakho. Cabanga usebenzisa i-plugin ye-Wordfence ukuvimba ibhu kanye ne-traffic yangaphakathi evela kuwebhusayithi yakho.
Izici zokuphepha ze-Wordfence plugin
Kusukela i-plugin yasungulwa, idinge ezinye izibuyekezo. Muva nje, i-Wordfence ithumele isici sokubuyekeza ngokuzenzakalelayo ukusiza ukuthengisa izimboni nokuvimbela ukukhubazeka kokuhlaselwa. Ngokwezinzuzo, ukubuyekezwa kwe-plugin ye-Wordfence kuthatha amahora angaba ngu-24 ukusabalalisa emhlabeni jikelele.
I-Wordfence ibhekwe njengenye yezinto ezinhle zokuphepha kwewebhusayithi ekukhangiseni kokuqukethwe. Cabanga ukufaka i-plugin ye-Wordfence ukulandelela ithrafikhi evela ebhodini nomsebenzi wangaphakathi. Ngaphambi kwebhubhothi efika kuwebhusayithi yakho, kumele idlule i-CloudFlare. Cabanga ukusebenzisa inhlanganisela ye-Wordfence ne-CloudFlare ukuvimbela ama-bots, amakhodi enonya, kanye ne-traffic yangaphakathi ekuthinteni iwebhusayithi yakho ye-e-commerce Source .